माछाको एक वेबसाईट हो जुन एबी इन्टर्नेटसँग सम्बन्धित छ, माछाको बिभिन्न नस्लहरूमा विशेष उपलब्ध छ जुन उनीहरूलाई आवश्यक हेरचाहको साथसाथै उपलब्ध छ। यदि तपाईं तिनीहरूलाई कसरी राम्रोसँग देखभाल गर्ने भनेर सिक्न चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई यो कसरी गर्ने भनेर सिकाउछौं ताकि तपाईं एक्वेरियमको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। के तपाइँ यसलाई याद गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
डे पेसेसको सम्पादकीय टीम सही माछा उत्साहीहरूको टोलीले बनेको छ, जसले तपाईंलाई सधैं उत्तम सल्लाह प्रदान गर्दछ ताकि तपाईं उनीहरूको उत्तम सम्भव देखभाल लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं हामीसँग काम गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, निम्न फारम पूरा गर्नुहोस् र हामी तपाइँसँग सम्पर्कमा रहनेछौं।
वातावरणीय विज्ञानको अध्ययनले मलाई जनावरहरू र तिनीहरूको हेरचाहको बारेमा फरक दृष्टिकोण दियो। म ती मध्ये एक हुँ जसले सोच्छन् कि माछालाई घरपालुवा जनावरहरूको रूपमा राख्न सकिन्छ, जबसम्म उनीहरूलाई केही हेरचाह दिइन्छ ताकि उनीहरूको जीवन अवस्था उनीहरूको प्राकृतिक ईकोसिस्टमसँग मिल्दोजुल्दो छ, तर अपा without्ग बिना नै उनीहरू बाँच्न र खाना खोज्न सक्छन्। माछाको संसार रमाइलो छ र मसँग तपाईं यसको बारेमा सबै कुरा पत्ता लगाउन सक्षम हुनुहुनेछ।
म कोलम्बियाली हुँ, सामान्य रूपमा जनावरहरूको माया गर्छु र विशेष गरी माछा। मलाई बिभिन्न नस्लहरू जान्न मन पर्छ, र उनीहरूको राम्रो देखभाल गर्न मैले सकेसम्म राम्रो गर्न सिकें र म जान्दछु उनीहरूलाई स्वस्थ र आनन्दित राख्नको लागि, किनभने माछा, साना भए पनि, राम्रो हुनु राम्रो हो।
माछा ती अद्भुत प्राणीहरू हुन् जसको साथ तपाईं अर्को दृष्टिकोणबाट विश्वलाई उनीहरूको व्यवहारको बारेमा धेरै सिक्ने बिन्दुमा देख्न सक्नुहुन्छ। पशु संसार मानव संसार जत्तिकै मनमोहक छ र ती मध्ये धेरैले तपाईंलाई प्रेम, कम्पनी, ईमानदारी दिन्छन् र सबै भन्दा माथि तिनीहरूले तपाईंलाई सिकाउँछन् कि धेरै क्षणको लागि तिनीहरूले तपाईंको सास लिन सक्दछन्। यद्यपि हामीले माछा र उनीहरूको व्यवहारलाई बिर्सनु हुँदैन त्यसैले गर्दा म यहाँ छु, यो अद्भुत विश्व बाँड्नका लागि तयार छ। के तपाई साइन अप गर्नुहुन्छ?
प्रकृति र पशु संसारको बारे मा उत्साहित, म सिक्न र माछाको बारेमा नयाँ कुरा बताउन मन पराउँछु, पशुहरू मायावी हुन सक्छ, तर मिल्छ पनि। र यदि तपाइँ तिनीहरूलाई कसरी व्यवहार गर्ने जान्नुहुन्छ, तपाईंको माछा पक्कै जीवनको लागि उत्तम हुनेछ।
मैले लामो समयदेखि माछालाई माया गरें। तातो वा चिसो, मीठो वा नुनिलो, तिनीहरू सबैको विशेषताहरू र एक तरिकाको हुन्छ जुन मलाई रमाईलो लाग्छ। मलाई माछाको बारेमा थाहा छ सबैकुरा बताउनु भनेको म साँच्चिकै रमाईलो गर्छु।
मलाई स्नोर्कल र समुद्र मा पौडी खेल्न मन लाग्छ जब कुनै जेलीफिश छैन। मेरो मनपर्ने समुद्री बासिन्दाहरु मा शार्क छन्, उनीहरु धेरै प्यारा छन्! र उनीहरु नारियल भन्दा धेरै कम मानिसहरु लाई मार्छन्!
म जनावरहरूको बारेमा लेख्न रमाईलो गर्छु र माछाको संसारको बारेमा धेरै उत्सुक छु, जसले मलाई अनुसन्धानमा पुर्‍याउँछ र उनीहरूको बारेमा मेरो ज्ञान साझा गर्न चाहन्छ।
म १ 1981 XNUMX१ मा जन्मेको थिए र मलाई पशुहरू, खास गरी माछा मन पर्छ। म उनीहरूको बारेमा सबै कुरा जान्न मन पराउँछु, कसरी उनीहरू आफैंको हेरचाह गर्छन्, तर तिनीहरूको व्यवहार कसरी उदाहरणको लागि। तिनीहरू धेरै उत्सुक छन्, र धेरै थोरै हेरचाहको साथ तिनीहरू वास्तवमै खुसी हुन सक्छन्।